अलराउन्डर अम्मली - जीवनशैली - नेपाल
प्याजजस्तो पत्रैपत्र छन्, वसन्त थापाको जीवनमा ।
र्‍याडिसन होटलअगाडिको मूलसडकवारि र पारि जुम्ल्याहाजस्ता साइनबोर्ड छन्, हिमाल बुक्स र हिमाल एसोसिएसन । यिनै दुई साइनबोर्डमुनि भेटिन्छन्, वसन्त थापा, ६८ । तर, दुवै ठाउँमा उनका लागि छुट्टै कुर्सी छैन । जहाँ अनुकूल पर्छ, त्यहीँ बसेर काम गर्छन् ।
हिमाल एसोसिएसनको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जोडिएको दुई दशक भइसक्यो । स्वयंसेवीको जस्तै छ उनको शैली । पैसा छ– लिन्छन्, पैसा छैन– लिँदैनन् । काठमाडौँ पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ)बाहेक यसको अरू परियोजना छैन । खोज पत्रकारिता केन्द्रदेखि सोसल साइन्स बहा:, शिक्षक मासिक, हिमाल बुक्स आदि संस्था छुट्टीभिन्न भइसकेका छन् ।
पन्ध्रौँ संस्करणको नजिक छ, किम्फ । वैकल्पिक धारका फिल्म देखाउने यो ‘प्लेटफर्म’ दर्शक र फिल्ममेकरका लागि ‘हब’ नै हो । नेपालगन्जबाट जहाज चढेर किम्फ हेर्न काठमाडौँ आएको थाहा पाउँदा उनलाई गौरव लाग्छ ।
विडम्बना के भने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराइरहेको किम्फसित नेपाली सिनेमाको कथित मूलधार भने बेखबर हुन्छ । निम्ता गर्दा पनि फिल्मकर्मी बिरलै झुल्किन्छन् । एसियामै पहिलोपटक खेलाँचीमै सुरु भएको किम्फमा १७ वर्षदेखि अध्यक्ष वसन्त नै छन् । अध्यक्षको कुर्सीमा अहिलेसम्म कसैले दाबी गरेको छैन । भन्छन्, “यो फेमिली इन्टरप्राइज होइन । यसमा जो पनि आउन स्वतन्त्र छ ।”
सयवटा ‘क्लासिक’ पुस्तक निकालिसकेको प्रकाशनगृह हो, हिमाल बुक्स । तर, उनी कस्ता प्रकाशक हुन् भने नेपाली लेखकलाई उतिसारो भाउ दिँदैनन् । “के मेरो कुनै काम छैन, म बेबकुफ हुँ ?” नेपाली पुस्तकको कमसल स्तरप्रति उनको असहमति छ, “मनै आल्हादित हुने, वागवाग हुने पुस्तक खोइ ?”
भारतीय लेखक खुसवन्त सिंहले भनेजस्तो उनलाई पनि दुई पृष्ठ पढ्दा नै पुस्तकबारे थाहा भइसक्छ । उनले नतरासेको भाषा पढ्न नसकेर थन्क्याएका नेपाली पुस्तक टन्नै छन् । उनी अंग्रेजी मात्र पढ्छन् र अभिव्यक्ति गर्छन् नेपालीमा । उनी आफैँ पनि गिनेचुनेका लेखक हुन् । भलै, उनले आफूलाई लेखकको कोटिमा राखेकै छैनन् । उनको व्यंग्यविनोदमय पुस्तक हो, ऋतुविचार । तर, त्यसमा उनले आफूलाई ऋतुराजको हुलियामा प्रस्तुत गरेका छन् । लेखनाथ पौड्यालको खण्डकाव्य ऋतुविचारकै नाम राखेको भनेर कमलमणि दीक्षित खुब रिसाएछन् उनीसँग ।
यसबाहेक उनी ‘दसैँ लेखक’ पनि हुन् । अनाम पाठकलाई सम्झेर पत्रिकाका दसैँ विशेषांकमा केही थान संस्मरण लेखेका छन् । “मेरो पनि जम्मा गर्‍यो भने ६० हजार शब्द त पुग्ला तर म आफूलाई लेखक ठान्दिनँ,” उनी भन्छन्, “कथा–उपन्यास नलेखी एकाध संस्मरण र रिपोर्टिङकै भरमा कसरी लेखक मान्ने ?”
साँच्चै भन्ने हो भने उनको लेखनको समय अनुवादले खाइदिन्छ । त्यसैले त सहरका शीर्ष वरीयताका महँगा अनुवादकका रूपमा परिचित छन् । अहिलेसम्म कति अनुवाद गरे ? उनले हिसाब राखेका छैनन् । धरानमै छँदा हिन्दीबाट सुरु गरेको त्यो कर्म अंग्रेजीसम्म तन्किएको छ ।
धेरै भाषाको ज्ञान छ, उनमा । नेवारी, उर्दूदेखि फ्रेन्च, स्पेनिस र रसियनसम्म । भाषाका कारण स्पेन गए पनि भोकै मर्दिनँ भन्ने आत्मविश्वास समेत छ । सम्पादन त्यस्तै रोमाञ्चक कर्म लाग्छ उनलाई । शंकर लामिछाने र धच गोतामेको लेखनलाई उनको सम्मान छ । भीएस नयपाल, ग्राहम ग्रिन, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल बर्माको गद्यका पारखी उनी राम्रा पुस्तक बडो फारो गरेर पढ्छन् । नसकियोस् भनेर मंगल कामना गरिरहन्छन् ।
धनकुटा बजार छेउको डाँडागाउँमा जन्मिएका हुन् वसन्त । कृषक परिवार भए पनि उनका बाजे राणाकालमा लेसि (लेखक–सिपाही) पदमा पुगेका रहेछन् । उनका बाबु इन्द्रबहादुर थापा पनि पढालिखा नै थिए । कुनै आरोप लागेर धनकुटा छाड्नुपर्ने स्थिति आएपछि ०१० मा विराटनगर झरेर यातायात मजदुरको नेता भएछन् ।
वामपन्थी राजनीतिमा लागेका बाबुसँग बहुत कम भेट हुन्थ्यो । कहिले हडताल र आन्दोलनमा त कहिले भूमिगत । पछि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भए र उपचारका लागि तत्कालीन सोभियत संघ पनि पुगे । घरमूलीका कारण आधा दर्जन छोराछोरीको मोर्चा आमाले सम्हाल्नुपर्‍यो ।
सन्तानमा जेठाबाठा हुन् वसन्त । उनका चार भाइ र एक बहिनी छन् । बाल्यजीवन कष्टसाध्य भयो । आठ आना, चार आना शुल्क तिर्न पनि मुस्किल । भगवती मिडिल स्कुल र धरान पब्लिक हाई स्कुलमा नि:शुल्क पढे । १४ वर्षको उमेरमै एसएलसी दिए, ०२१ मा । महेन्द्र कलेजमा मानविकी लिएर पढे । त्यतिन्जेल गाउन, बजाउन र नाच्न सिपालु कलाकारमा दरिइसकेका थिए, वसन्त ।
तिनताका धरानमा दुईवटा संस्था थिए, सांस्कृतिक संस्थान र नेपाल लोकनृत्य संघ । संस्थानमा दीप श्रेष्ठ आबद्ध थिए भने संघमा नवीनकिशोर राई । लोकनृत्य संघमा आबद्ध भएर वसन्त वनारस गए । वनारसको वामपन्थी निकट छात्र संघले निम्त्याएको टोलीमा नवीनकिशोर र तीन केटी पनि थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको सोभियत संघको तासकन्द पुगेका बेला हृदयघातका कारण निधन भएपछि राष्ट्रिय शोक मनाउँदै १५ दिनसम्म कार्यक्रम रोकियो । पाँच–६ दिनलाई गएको वसन्तको टोली वनारस एक महिना बस्यो, कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको डेरामा ।
यति मात्र नभएर वसन्तले मूल फुटेको पानीजस्ता कविता लेखे । धरानमै छँदा ‘म पत्थरको देवता होइन...’ गाएर चर्चाको चुली चुमेका दीप श्रेष्ठको उक्साहटमा उनी गीतकार पनि कहलिए । दीप गाउन सक्थे, संगीत भर्न सक्थे । तर, उनलाई गीत लेखिदिने कोही भएनन् । त्यसैले उनले धराने जल्दाबल्दा कविहरूलाई उकासे, ‘लौ लेख तिमीहरू ।’
वसन्तले लेखे, ‘कहाँबाट ल्याऊँ म सपनाको देश... ?’, ‘मुटु चिरी रगत पोखेँ...’, ‘देख्नेले भनून् बिहानीको शीत हो यो...’ आदि गीत । उनका काका शिवशंकर थापाले लेखे, ‘भन्थिन् मेरी उनी... ।’ वसन्तका प्राय: गीत दीप श्रेष्ठले नै गाएका छन् ।
प्याजजस्तो पत्रैपत्र छन्, वसन्तको जीवनमा । कहिलेकाहीँ उनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, हरिवंश राय बच्चनले भनेजस्तो, ‘क्या भुलुँ ? क्या याद करुँ ?’ सिनेमाको सोखिन भएकाले हिमालय टाकिज, इन्डियन कोलोनी र गणेश टाकिज वरिपरि चक्कर लगाइरहन्थे । मागेर, चोरेर हुन्छ कि रोएर उनलाई सिनेमा हेर्नैपथ्र्यो । ब्रिटिस क्याम्पमा हलिउडका थ्रिलर, एक्सन, ड्रामा, रोमान्टिक, कमेडी, म्युजिकल, वारमुभी, वेस्टर्न, साइफाइ इत्यादि फिल्म हेरे उनले । डायलग सिके, अनेक सितारासित पर्दामै परिचय भयो ।
यति मात्र होइन, वसन्तले बिटल्सको संगीत सुने । पुस्तकालय धाए । उनलाई सम्झना छ, बीपी कोइरालाले लक्ष्मी वाचनालयको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको । “त्यही वाचनालयका कारण लक्ष्मीचोक, लक्ष्मीसडक बनेको छ अहिले,” उनमा विनोदप्रियता झल्किहाल्छ, “खासमा त्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका सम्मानमा राखिएको नाम हो तर मानिसले धनपति लक्ष्मीप्रसाद आचार्यजस्तो बुझे ।”
धरानलाई वसन्त थापाले चिनेको चानचुन ६४ वर्ष भइसक्यो । त्यतिबेला एउटा चन्द्रनगर थियो, अर्को जुद्धनगर । चन्द्रशमशेरले बसालेको नगरलाई पुरानो बजार भनिन्थ्यो भने जुद्धशमशेरले बसालेको नगरलाई नयाँ बजार । त्यतिखेरको धरान आधासरो जंगल थियो । खरायो र बट्टाई मार्न धेरै पर गइराख्नु पर्दैन्थ्यो । ढोकाछेउमै स्याल कराउँथ्यो ।
धरान झरे पनि उनलाई धनकुटाले तानिरह्यो । बाजेबज्यैको लगावले दसैँ–तिहार होस् कि साउने संक्रान्ति, झोला बोकेर चुइँचुइँ हिँडिहाल्थे । धरानकै महेन्द्र कलेजमा बीएसम्म पढेका वसन्तको काठमाडौँ आएर पढ्ने हैसियत थिएन । अझ काठमाडौँ आउन जोगवनी, रक्सौल हुँदै त्रिभुवन राजपथको बाटो तय गर्नुपथ्र्यो ।
भुँडी खोलेर भन्दाखेरि उनलाई काठमाडौँ बोलाए, पिताजीका साथी कृष्णराज बर्माले ०२७ मा । डेरा पनि उनले नै खोजिदिए । गणितमा कमजोर भएकाले अर्थशास्त्र पढ्न सकेनन् र नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गरे । यसबीचमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन (नेराविफे) को केन्द्रीय सदस्य, सचिव हुँदै राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसकेका थिए वसन्त । त्यतिबेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दुइटा धार थिए, एउटा वनारसमा, अर्को काठमाडौँमा । वनारसतिर पुष्पलाल थिए, यता केशरजंग रायमाझी ।
धरान हुन्जेल झापाली कम्युनिस्ट भनिन्थे वसन्त । यता आएपछि केशरजंगका मानिए । बाबु पनि केशरजंग निकट भएकाले उनलाई उतैतिर ‘संशोधनवादीका छोरा’, ‘मस्कोपन्थीका छोरा’को बिल्ला भिराइसकेका थिए । त्यसैले फिल्म पनि लुकेर हेर्नुपथ्र्यो, केटीसँगै हिँड्दा कारबाही डन्डा बर्सिने डर हुन्थ्यो ।
झापालीको संगतमा परेर क्रान्तिका लागि झन्डै आठराई (तेह्रथुम) पुगिसकेका थिए वसन्त । त्यहाँ गएका उनका कतिपय साथी सहिद भए भने नरेश शाक्यजस्ता कवि–साथी बिरामी । सशस्त्र विद्रोहको तयारीका निम्ति सर्दूखोलानजिक चारकोसे झाडीमा गएका उनका साथी बारुदका छिर्काले घाइते भए ।
काठमाडौँमा उनको किताब पढ्ने जक्सन थियो, प्युखाको इन्टरनेसनल बुक हाउस । त्यहाँ म्याक्सिम गोर्कीदेखि लेनिनका पुस्तक पढ्दापढ्दै सोभियत भूमि पत्रिकामा काम पाए । मदनमणि दीक्षित सम्पादकत्वको समीक्षा साप्ताहिकमा विशेष संवाददाता पनि भए । परीक्षित उपनाममा स्तम्भ लेखे, ‘अन्तरकुन्तरबाट ।’
“मदनमणिका अक्षर गान्धीजीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका थिए । उहाँले ‘पनि’ लाई जहिल्यै ‘पनी’ लेख्नुभयो,” उनी समीक्षाका बोसकै समीक्षा गर्छन्, “त्यसले उहाँलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उपकुलपति र ठूलो लेखक हुनबाट रोकेन ।”
यसबीचमा कानुनमा पनि स्नातक गरे । नेपाल ल कलेजको शुल्क भने त्यहीँका शिक्षक कृष्णप्रसाद भण्डारी (वरिष्ठ अधिवक्ता)ले तिरिदिँदा रहेछन् । भण्डारी रायमाझीकै पार्टीका कार्यकर्ता थिए । नेराविफेको अध्यक्ष भएका बेला वसन्तले सन् १९७५ मा तीन महिना मास्को र बर्लिन जाने मौका पनि पाए ।
धरानमै महेन्द्र कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव भएका वसन्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु अध्यक्षमा उठेका रहेछन् । तर, ३० भन्दा बढी भोट पाएनन् । “मेरो भाषण सुन्न केटीहरू लुँडो लागेर आउँथे तर भोटचाहिँ दिएनन्,” उनको गुनासो छ, “भाषण मेरो सुने, भोट नेविसंघ र अनेरास्ववियुलाई दिए ।”
वाककलाका धनी वसन्त तीन वर्ष नेराविफेका अध्यक्ष भए । जीवनको एक झमट उनलाई के लाग्यो भने राजनीति पुगिसरी आउनेको काम हो । विश्वका अधिकांश नेता भूमिपति या सम्भ्रान्त वर्गबाटै आएका छन् । त्यसपछि उनले राजनीतिसँग सजिलै सम्बन्धविच्छेद गरे । त्यो समय पनि ३७ वर्ष नाघिसक्यो । “कमल थापा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको अध्यक्ष हुँदा म फेडेरेसनको अध्यक्ष थिएँ,” उनी सम्झिन्छन्, “यथार्थले क्वारक्वार्ती हेर्न थालेपछि मैले जागिरलाई नै जीवनको बाटो बनाएँ ।”
हीराका अनेक पाटा हुन्छन् । त्यस्तै ‘मल्टी फ्यासेट’ मौजूद छन् उनमा । धरान पब्लिक हाई स्कुलमा पढाए । टुरिस्ट गाइड गरे । एभरेस्ट ट्राभल एजेन्सीमा म्यानेजर भए । जीवनलाल श्रेष्ठसित मिलेर भूगोलपार्कको पारस होटल (पीनट्स)को भुइँतलामा प्वाइन्ट एट नामक रेस्टुराँ खोले । पाँच वर्ष त रक्सी नै बेचे ।
यसको कारण के भने, उनले घरजम गरिसकेका थिए । बिहे हुन पो समय लाग्छ, बच्चा हुन लाग्दैन । फुर्तिला तन्नेरी वसन्त नारीहरूका प्यारा थिए । तर, कोलकातामै जन्मेहुर्केकी सुन्दरी प्रमिलाले उनलाई ‘ एम्बुस’मा पारिदिइन् । काठमाडौँमा तिनलाई भेटेपछि पछ्याउन छाडेनन् । बिहेको ४०औँ वर्षगाँठ मनाइसकेका वसन्त हाँस्छन्, “दुर्भाग्यले उनी मजस्तो गुन्डाको फेला परिन् ।” छोरी भूमिका रेडियो जक्की थिइन्, अहिले व्यापारमा छिन् । छोरा अभिषेक एक विदेशी परियोजनामा काम गर्छन् ।
अतिरिक्त परिचयबाटै उनले सामाखुसीमा जग्गा किने, घर बनाए । झ्यालमा सिसा नै नराखी भुइँ र भित्ता प्लास्टरै नगरी घर सरे ०४६ मा । भोटेबहालमा खोलेको गेस्ट हाउसले भने उनलाई डुबायो । बारम्यानले रक्सी मात्र खन्याउँथ्यो, वेटरले टेबलसम्म प्लेट पुर्‍याउँथ्यो, उनले त बारम्यानदेखि मसाल्चीसम्मको काम गरे । त्यो पनि लन्डन, न्युयोर्कमा होइन, काठमाडौँमै ।
गेस्ट हाउसमा फ्लप खाएपछि वसन्तको जिन्दगीले अर्कै मोड लियो । सन् १९९१ मा हिमाल ग्रुपको व्यवस्थापनमा आबद्ध भए । पछि गएर हिमाल द्वैमासिकका सम्पादक भए ०५२ देखि ०५५ सम्म । त्यसलाई उनी ‘नेपाली म्यागेजिनकारिताकै मानक’ मान्छन् ।
हिमालको सम्पादक हुँदा पनि टुर गाइडको तालिम काम लाग्यो उनलाई । अमेरिकन ट्ेरकिङ ग्रुपको टोली नेता भए । चार्टर्ड जहाजमा ‘क्लासिक ट्रेक’ गरे । ३० जना त स्टाफ हुन्थे । एक पर्यटक बराबर दुई स्टाफ । दिनको डेढ सय डलरका दरले तीन–चार हजार डलर कमाए । त्यही पैसाले छोराछोरीलाई भारतमा पढाए । सन् २००१ मा अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा हमलापछि उनको पेसाकै जमानत जफत भइहाल्यो ।
राजनीतिको प्रभाव के भने वसन्तले हरेक क्षेत्रमा संगठन गर्न छाडेनन् । रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान)का संस्थापक भए । प्रकाशक तथा पुस्तक बिक्रेता संघको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भए । नेपाल पर्वतारोहण संघको महासचिव र हिमालय उद्धार संघको सचिव पनि । मणि लामा, मोहन खड्का, हरिवंश किरात, कुल लिम्बूसित मिलेर ग्रुप अफ एमोच्योर फोटोग्राफर खोले । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट त्यो जमानामा उनी एसएलआर क्यामेरा सोझ्याउँदै हिँडेका रहेछन् ।
उनले जानेको एउटै कुरा हो, काम । के काम भन्ने तपसिलमा छ । टुपी कसेर प्राज्ञिक अध्ययन गर्न नपाएको बाहेक जीवनमा खेद केही छैन उनलाई । उनले कुनै बाटो रोजेनन् । जे भेटियो, त्यही अँगाले मात्र । उनलाई धेरैले ‘रसिक’ मान्छन्, घरमा भने ‘रक्स्याहा ।’ विद्यार्थी आन्दोलनताका विराटनगरमा दुई महिना जेलमा बस्दा चुरोटका अम्मली बनेका रहेछन् ।
उनको प्रिय पुस्तक हो मारियो पुजोको गडफादर । भुइँचालो आएको दिन पनि त्यही दोहोर्‍याइरहेका थिए । पुस्तकको सार हो– जीवन सुन्दर छ । सुन्दर तरिकाले बाँच्न जान्नु कला हो । “म डरलाग्दो सफल मानिस होइन । पुनर्जन्म लिएँ भने म अहिलेकै कामलाई निन्तरता दिन चाहन्छु,” उनको अठोट छ, “कुनै माइकालालले र्‍याडिसन होटल जिम्मा दिए पनि लिन्नँ ।”